सात थरी लभस्टोरी फिल्म
सबै उमेर र वर्गका दर्शकले मन पराउने फिल्म लभस्टोरी हो। यो सबैलाई ग्रहणयोग्य मानिन्छ। र, सबैले लभस्टोरीलाई आत्मसात् गर्न सक्छन्। भारत र नेपालमा बन्ने सबैजसो फिल्ममा नायक र नायिका हुन्छन्। जुनसुकै विषय भए पनि नायक–नायिकाको प्रेमले स्थान पाएकै हुन्छ।
हलिउडमा विविध जान्रका फिल्म बन्छन् र चल्छन् पनि।
नेपालमा चाहिँ अधिकांश फिल्म लभस्टोरी नै हुन्छन्। फिल्मका दर्शक धेरैजसो युवा उमेरकै छन्। र, उनीहरूमाझ लभस्टोरी बढी लोकप्रिय छ। जोखिम कम हुने हुनाले नेपालमा लभस्टोरी फिल्म बढी बनेका हुन्।
लभस्टोरी अर्थात् रोमान्स फिल्मलाई सात जान्रमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। नेपालमा बनिरहेका लभस्टोरी फिल्म ती विधाअनुसार छन् या छैनन् ? यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा बढी चल्तीमा रहेको जान्र रोमान्टिक कमेडी हो भन्दा फरक पर्दैन। लभस्टोरी फिल्म बनाउने र त्यसमा ह्युमर मिसाउने। यो जान्रका फिल्म बलिउड र हलिउडमा पनि बन्छन्। तर, नेपालमा ह्युमरको डोज अलि चर्को राख्ने चलन छ। हास्य पैदा गर्न संवाद, सिचुएसन र हाउभाउमा अति नाटकीयता पस्किने गरिन्छ।
रोमान्टिक कमेडीलाई छोटकरीमा रोम–कम भनेर पनि बुझिन्छ। रामबाबु गुरुङको ‘कबड्डी’ रोमान्टिक कमेडी फिल्मको एउटा उदाहरण हो। दयाहाङ राई र रिश्मा गुरुङको लभस्टोरीमा बुनिएको यो फिल्म हास्यरसले भरिपूर्ण छ। यसमा कमेडीको मात्रा सन्तुलित छ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘छक्कापञ्जा’ सिरिज रोमान्टिक कमेडी फिल्मका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। ‘छक्कापञ्जा’ चलेपछि यस्तै शैलीका फिल्म बनाउने होडबाजी नै चलेको छ। तर, रोमान्टिक कमेडी राम्रो हुनका लागि के–कस्तो ‘ड्रामाटिक इलेमेन्ट’ समावेश गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ धेरैले अध्ययन गरेका छैनन्।
अंग्रेजी रोमान्टिक कमेडीमा सन् १९९४ को ‘फोर वेडिङ्स एन्ड अ फ्युनरल’, २००३ को ‘लभ एक्चुअली’, १९६० को ‘द अपार्टमेन्ट’लाई राम्रा उदाहरण मानिन्छ। सन् २०१२ को ‘बर्फी’, २०१७ को ‘बद्रीनाथ की दुल्हनियाँ’जस्ता फिल्मले रोमान्टिक कमेडीमा बलिउडको प्रतिनिधित्व गर्छन्।
फिल्मलाई रोचक र मनोरञ्जक बनाउन विभिन्न ‘एक्सपेरिमेन्ट’ गरिन्छ। त्यस्तै, एउटा ‘एक्सपेरिमेन्ट’ हो रोमान्टिक थ्रिलर। लभस्टोरी फिल्ममा थ्रिलर मिसाउँदा ‘रोमान्टिक थ्रिलर’ बन्छ। यस्तो खाले फिल्ममा रोमान्स पनि हुन्छ र साथमा थ्रिल पनि।
२०१२ मा रिलिज भएको आमिर खानको ‘तलाश’लाई रोमान्टिक थ्रिलरको स्पष्ट उदाहरण मान्न सकिन्छ। रीमा कागतीद्वारा निर्देशित यस फिल्ममा आमिर उच्च प्रहरी अधिकृत सुर्जन सिंहको भूमिकामा थिए।
एक चिरपरिचित फिल्म अभिनेता अरमान कपुरको कार दुर्घटनामा परी मृत्यु हुन्छ। सोही दुर्घटनासँग जोडिएको रहस्य सुल्झाउन सुर्जन दिनरात तल्लीन रहन्छ। घटनास्थलको निरीक्षण र थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा सुर्जनको रोजी नामक युवती (करिना कपुर) सँग अन्तरंग सम्बन्ध कायम हुन्छ। रोजीसँगको सम्बन्ध एउटा ‘थ्रिल’मा पुगेर टुंगिन्छ।
बलिउडमा यस विधामा कमै फिल्म बन्ने गर्छ। सन् २०१७ को ऋतिक रोशनद्वारा अभिनीत ‘काबिल’ फिल्म पनि रोमान्टिक थ्रिलर हो। यसमा ऋतिक र नायिका यामी गौतम दुवै दृष्टिविहीन प्रेमी–प्रेमिकाको भूमिकामा छन्।
नेपालमा रोमान्टिक थ्रिलर लगभग बनेकै छैन। तैपनि, विपिन कार्कीको ‘नाका’लाई केही हदसम्म यही जान्रको मान्न सकिन्छ। यसमा सजन थापामगर र थिन्ले ल्हामोको सम्बन्धले रोमान्टिक थ्रिल महसुस गराउँछ।
अधिकांश लभस्टोरी फिल्म रोमान्टिक ड्रामा हुन्। नेपालमा त रोमान्टिक ड्रामाभन्दा अरू फिल्म बन्दैन भन्दा फरक पर्दैन। धेरैजसो नेपाली फिल्ममा नायक–नायिकाको प्रेम र खलनायकको अवरोध समेटिएको हुन्छ। अरू खाले कथावस्तु फिल्ममा बिरलै उठाइएको हुन्छ।
सामान्यतया नायक र नायिकाको भेट, प्रेम, अवरोध र मिलन वा बिछोडमै अडिएका हुन्छन्, यस शैलीका फिल्म। भर्खरै रिलिज भएको फिल्म ‘समर लभ’ पनि रोमान्टिक ड्रामा हो। मुस्कान ढकालद्वारा निर्देशित ‘समर लभ’ पनि नायक–नायिका अतीत र सायाकै वरिपरि घुमेको छ। यसमा सायाको बुबाले उनीहरूको प्रेममा अवरोध सिर्जना गर्छ।
रोमान्टिक ड्रामा संयोगान्त वा वियोगान्त दुवै किसिमका हुन सक्छन्। प्रेम कि सफल हुन्छ कि असफल। यो अनुमान गर्न सकिने कुरा हो। तर, फिल्ममा त्यसलाई नाटकीय रूपमा उतारिन्छ। जसले यो ‘ड्रामा’ रोचक बनाउन सक्छ, उसको फिल्म राम्रो हुन्छ।
नेपालमा मात्र होइन बलिउडमा पनि धेरैजसो बन्ने फिल्म यही विधाका हुन्छन्। आमिर खानको ‘राजा हिन्दुस्तानी’ होस् या शाहरुख खानको ‘दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे’ अथवा सलमान खानको ‘तेरे नाम’ सबै रोमान्टिक ड्रामा हुन्।
दन्त्यकथा वा किंवदन्तीका पात्रलाई लिएर बनाइएको लभस्टोरी फिल्म ‘रोमान्टिक फ्यान्टासी’ अन्तर्गत पर्छ। पुराना साहित्यिक कृतिले आदर्श प्रेमका रूपमा स्थापित गरेका कथामा बनेका फिल्म पनि यही शैलीका हुन्। जस्तै, ‘मुनामदन’।
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उक्त खण्डकाव्यले मुना र मदनलाई आदर्श प्रेमी–प्रेमिकाका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। सोही कृतिमा आधारित भई ज्ञानेन्द्र देउजाले ‘मुनामदन’ फिल्म निर्देशन गरेका हुन्। त्यसैले यो पनि एउटा रोमान्टिक फ्यान्टासी फिल्म हो। यसमा पात्र र परिवेश छन् तर निश्चित समयकाल खुलाइएको छैन।
किंवदन्तीमा आधारित फिल्म ‘राजमती’ अर्को रोमान्टिक फ्यान्टासी हो। नीर शाहद्वारा निर्देशित नेवार भाषाको यस फिल्ममा काठमाडौँमा फूल बेच्ने युवक र शहरकी एक युवती बीचको प्रेमकथा हेर्न पाइन्छ।
भारतमा यस्ता फिल्म धेरै बन्छन्। ‘बाहुबली’ र ‘मागाधिरा’ जस्ता फिल्मले फ्यान्टासीमै बगेका छन्। हलिउडमा ‘ब्युटी एन्ड द बिस्ट’, ‘सिन्डरेला’जस्ता रोमान्टिक फ्यान्टासीको कुनै कमी छैन।
नेपालमा बन्न नसकेको फिल्म रोमान्टिक एक्सन पनि हो। यसमा रोमान्स र एक्सन दुवै बराबर पस्किएको हुन्छ। यस्ता फिल्ममा नायक–नायिका दुवै एक्सन भूमिकामा हुन्छन्।
ब्राड पिट र एन्जेलिना जोलीले अभिनय गरेको सन् २००५ को हलिउड फिल्म ‘मिस्टर एन्ड मिसेस स्मिथ’ यो जान्रको उत्कृष्ट उदाहरण हो। यसमा उनीहरू जोन–जेन दम्पतीका रूपमा देखिन्छन्।
दुवै जना फरक कम्पनीका लागि कार्यरत ‘कन्ट्र्याक्ट किलर’ हुन्छन्। तर, एकले अर्कालाई यो कुरा बताएका हुँदैनन्। एक दिन दुवै जना एउटै मान्छे मार्न खटाइन्छन्। र, एकअर्कासँग आमनेसामने हुन्छन्। यही फिल्ममा काम गर्दागर्दै ब्राड पिट र एन्जेलिना जोलीबीच प्रेम अंकुराएको थियो।
सन्् २०१० को फिल्म ‘नाइट एन्ड डे’ पनि यही शैलीको फिल्म हो। टम क्रुज र क्यामरन डायज अभिनीत फिल्म एक्सन र स्टन्टले भरिभराउ छ। एकसाथ भाग्ने क्रममै दुई पात्रबीच प्रेम पलाउने कथा यसमा छ।
यही फिल्मको रिमेकका रूपमा आएको सन् २०१४ को हिन्दी फिल्म ‘ब्याङ ब्याङ’ पनि रोमान्टिक एक्सन हो। फिल्ममा ऋतिक रोशन र कट्रिना कैफले अभिनय गरेका छन्। यसमा लन्डनबाट हिरा चोर्ने कथा रहेको छ। नेपालको ‘कृ’लाई केही हदसम्म रोमान्टिक एक्सनको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ। तर, यो ‘एक्सन रिभेन्ज’ बढी हो।
कुनै ऐतिहासिक पात्र वा घटनालाई समावेश गरी निर्माण गरिएको लभस्टोरी फिल्म ‘हिस्टोरिकल रोमान्स’ हुन्। इतिहाससँग जोडिएको भए पनि कथा शतप्रतिशत सत्य हुनैपर्छ भन्ने छैन। इतिहासमा काल्पनिकता मिसाइएको हुन सक्छ।‘प्रेमपिण्ड’ र ‘वसन्ती’ नेपालका दुई हिस्टोरिकल
रोमान्स जान्रका फिल्म हुन्। जनरल एड्विन र सविता नामक सुसारेको प्रेमकथा फिल्ममा हेर्न पाइन्छ। नीर शाहद्वारा निर्मित फिल्मको निर्देशन यादव खरेलले गरेका हुन्।
नीर शाहको निर्देशनमा बनेको ‘वसन्ती’मा गगन सिंह र वसन्तीको रोमान्सलाई उतारिएको छ। गगन सिंह ऐतिहासिक पात्र हुन्। वसन्ती काल्पनिक पात्र मानिन्छ।
बलिउडका ‘जोधा अकबर’, ‘बाजीराव मस्तानी’ र हलिउडका ‘गन विद द विन्ड’ र ‘टाइटानिक’ हिस्टोरिकल रोमान्स जान्रका मुख्य उदाहरण हुन्। खर्चिलो हुने हुनाले यो विधाका फिल्म नेपालमा कमै बन्छन्।
महिला दर्शकप्रति लक्ष्य गरिएको लभस्टोरी फिल्मलाई ‘चिक फ्लिक’ भनिन्छ। यसमा लभ र रोमान्स हुन्छन्। अरूभन्दा फरक के हो भने यसमा महिला पात्र लिड रोलमा हुन्छे।
महिला त्यसमा पनि युवतीहरू यस्ता फिल्मका लक्षित दर्शक हुन्छन्। सबै ‘चिक फ्लिक’मा लभ नै हुन्छ भन्ने छैन। बच्चा र आमाको सम्बन्ध वा साथीभाइबीचको मित्रतामा पनि यो बनेको हुन सक्छ।
पछिल्लो समय विभिन्न अवार्ड पाएर चर्चामा रहेको फिल्म ‘ला ला ल्यान्ड’लाई पनि कतै–कतै चिक फ्लिक नै भनिएको छ। सन् २००८ को फिल्म ‘ट्वाइलाइट’ पनि ‘चिक फ्लिक’ हो। नेपालमा यस्ता फिल्म बनेका छैनन्। तैपनि, ‘हाउ फन्नी’ र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’लाई यो विधामा समेट्न सकिन्छ।
नेपाली फिल्मकर्मीका आठ गलत तर्क
चोर्नुभन्दा फिल्म नबनाउनु राम्रो
२१ बैशाख २०७६
कलाकार होइन निर्देशकको नाम बिक्नुपर्छ
फिल्म चाहिँ टप बक्सअफिसमा फ्लप
०७ बैशाख २०७६
२६ वर्षपछि पनि ‘उजेली’ किन हिट?
२७ चैत २०७५